Global Voices teny Malagasy · Raveloaritiana Mamisoa – Janoary 2019
Raveloaritiana Mamisoa · Janoary, 2019
Nanomboka nandika tamin'ny 22 Febroary 2011 · 2818 Lahatsoratra
Lahatsoratra farany an'i Raveloaritiana Mamisoa tamin'ny Janoary, 2019
Mety hitarika sivana antserasera ve ny lalànan'ny fiarovana antserasera ao Fiji?
Manambara "Fiarovana" antserasera ny lalàna voalaza, raha manokatra lalana ho an'ny "cheval de troie" ho an'ny "fifehezana" ny aterineto sy ny fanivanana ireo feo manohitra kosa ny fanjavozavonan'ny andraikitra amin'ny fahalalaham-pitenenana.
Ejipta: Bilaogera voatafika ao an-tranony
Notafihan'ny polisy sy ny rahalahiny izaho sy ny reniko, niditra an-keriny tao an-tranonay izy ireo ary nidaroka ahy. Misy maratra ny lohako ary tapaka koa ny nifiko iray. Tonga ato an-tranoko ny kolikolin' ny polisy!
22 Janoary 2019
Ejypta: Bilaogera nanjavona taorian'ny famotsorana azy
Na dia navotsotry ny Mpampanoa lalàna aza ilay bilaogera Ejipsiana Abdel Rahman Fares (25 taona), dia mbola tsy fantatra izay misy azy. Nosamborina tamin'ny 5 Aprily i Fares izay mibilaogy ao amin'ny Lesani Howa Qalami.
21 Janoary 2019
Ny marainan'ny zoma 15 janoary 2010, vondrona bilaogera Ejiptiana sy mpikatroka ara-politika no nankany Naga Hammadi (faritanin'i Qena, atsimon'i Ejipta) mba hanolotra ny fiaraha-miorin'izy ireo ho an'ny fianakavian'ireo niharam-boina tamin'ny fifandonana ara-pivavahana teo amin'ny Miozolomana sy ny kristiana.
17 Janoary 2019
Malezia: Voampanga ilay bilaogera namoaka sary hosoka misy ireo mpanao politika
Mpanoratra Daniel Chandranayagam · Malezia
Bilaogera iray no voalaza fa nandefa sary hosoka misy an'i Kelantan Mentri Besar, Nik Abdul Aziz Nik Mat sy ny mpitarika mpanohitra Anwar Ibrahim. Voalaza fa misy an'i Nik Abdul Aziz manao firaisana ara-nofo amin'i Anwar ilay sary.
Nanonona fikambanana 60 ho mpitsikilon'ny “ady mandambolambo” ny minisiteran'ny fitsikilovana ao Iran
Mpanoratra Pendar · Iràna
Vao haingana, dia lisitra ahitana fikambanana 60 no navoakan'ny minisiteran'ny fitsikilovana Iraniana izay miampanga azy ireo fa mazoto amin'ny ady mandambolambo atao amin'ny fitondrana Islamika ao Iran. Heverina ho heloka bevava ary voaràra ny fiarahamiasa amin'ireo fikambanana ireo sy ireo fampahalalam-baovao manana fifandraisana amin'ireo fikambanana ireo.
Ejipta: Lavina ny fandraofana tsy ara-dalàna ireo fitaovan'olona manokana
Ny 30 Jona 2009, notanan'ireo mpitandro filaminana ao amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenenan'i Cairo ilay bilaogera, Wael Abbas, izay manoratra matetika ny tranga fampijaliana sy ny fanararaotana ataon'ny polisy any Ejipta. Natao fikarohana ihany koa Atoa. Abbas ary nalain'ny polisy an-keriny ny solosaina findainy sy ny fananany hafa.
16 Janoary 2019
Na dia teo aza ny fanafihany ireo mpikatroka an-tserasera, indrindra fa ireo bilaogera, amin'ny ezaka hiadiana amin'ny fampiasana media elektronika ho an'ny zon'olombelona sy politika, dia nanomboka nampiasa fitaovana elektronika toy izany ihany koa ny governemanta Ejipsiana, saingy ho an'ny tombotsoany manokana.